Nicotinamide (နီကိုတင်းနမိုက်) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ဆေးဝါးများ » ဆေးဝါးနှင့်ဆေးဖက်ဝင် » ဆေးဝါးများအားလုံး » Nicotinamide (နီကိုတင်းနမိုက်)
Nicotinamide (နီကိုတင်းနမိုက်) ကဘာလဲ။
Generic Name: Nicotinamide (နီကိုတင်းနမိုက်) Brand Name(s): Generics only. No brands available.
Nicotinamide. http://www.mayoclinic.org/drugs-supplements/niacin--niacinamide/background/hrb-20059838. Accessed September, 25, 2016.